China Kucheka Mat ye Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ kucheka bonde re Silhouette cameo Kugadzira uye Fekitori | Allwin
【Kucheka Mat ye Silhouette Cameo】 - 12x12 yekucheka bonde ndiyo sutu yeSilhouette cameo 3/2 / 1. Aya mateki ekucheka ane mitsara chaiyo grid, iyo inobatsira zvikuru iyo yekucheka maitiro. Iyi yekucheka bonde yeSilhouette Cameo ichakubatsira iwe kupedzisa yako yekugadzira dhizaini zvirinani.
Cutting Iyo yekucheka mat saizi】 - Aya ekucheka mativi akayerwa nzvimbo saizi: 12x12 Inch (305X305mm), iyo yese yekucheka mat size: 12.99x14Inch (325X345mm) (L * W).
【Yakakwira Hunhu hwePVC Chinyorwa】 - Aya MATS akagadzirwa neakasimba mavara ePV zvinhu izvo zvisingazopera mushure mekushandisa zvakapetwa. Inofananidzwa nemamwe mabhureki, iri yakaoma uye yakasimba.
【Kucheka Mats Mats chengetedzo】 - Shandisa iyo inokwenenzvera kubvisa zvikamu zvakawandisa uye spatula kunyatso bvisa mifananidzo yakatemwa. Chengeta iyo yakajeka firimu chifukidziro pane yekucheka bonde kana uchichengeta kuti urambe uchicheka bonde rinonamira rakasununguka kubva kune marara uye guruva.
Item Model Nhamba 8812
Chigadzirwa Zviyero 325x345 mm
Saizi (Kudhinda saizi) 12 x 12 INCH
Dzakakodzera Machine Silhouette cameo 3/2/1
Adhesives yekucheka bonde, ukobvu hwezvinhu 0.5mm. Izvo zvinhu zviri pachena PVC. Kunamatira kune mhando mbiri: kunamira kwakakwirira uye kuomerera kwakawanda. Tinewo mamwe saizi: 12 "x 24", 12 "X 8", 12 "x 6", 4.5 "x 12", 4.5 "x 6.5" inches.
5 akaturikidzana A5 Kucheka Mat, 661A5, Self kurapa Cu ...